ဗမာလူမျိုးတစ်စု၏အကြမ်းဖက်မှုကြောင်းဟာဖိဇ်ဆရာ သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းနှင့်အခြားသတင်းစုံ … | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဗမာလူမျိုးတစ်စု၏အကြမ်းဖက်မှုကြောင်းဟာဖိဇ်ဆရာ သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းနှင့်အခြားသတင်းစုံ …
မိတ္ထီလာမြို့ မင်္ဂလာဇေယျံ ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းမှ အကြမ်းဖက်သမားများ ၏ သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံလိုက်ရသော ကုန်အာန် အာဂုံဆောင် ဆရာတစ်ဦး
အကြမ်းဖက်သမားများ အန္တရာယ်ကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာ ရသော မိသားစု တစ်စု
It is reported that the religious riot which has started as business dispute between shop owner and customer on 20 March is not under control yet. This morning about9am, violence breaks out again in Dhobi Kong. In some areas, Muslims’ houses are still intact because they fled into forest last night. However, those people are taken into refugee camps by the police for security reason. It is reported that there is no enough water supply in those camps.
A victim from Meiktila said to M Media that “(They) set ablaze in Dhobi Kong right now. One of my friends is in army quarter. His friend from army was worried about his security so he came and picked him up. A father and his son who escaped from Dhobi Kong by motorcycle were halted by terrorist mob and they were beaten to death. They died on the spot. I saw this with my own eyes.
Muslim residents carry their belongings as they evacuate their house toatemporary relief camp under police protection in riot-hit Meiktila, central Myanmar on March 22, 2013. Charred bodies lay unclaimed on the streets ofariot-hit town in central Myanmar, witnesses said, as global pressure mounted for an end to the Buddhist-Muslim unrest. Parts of Meiktila have been reduced to ashes in the most serious communal violence to hit the former junta-ruled nation since last year, leaving the authorities struggling to bring the situation under control. AFP PHOTO/Soe Than WIN (Photo credit should read Soe Than WIN/AFP/Getty Images) 2013 AFP
Policemen stand guard outsideapartially-burnt mosque in riot-hit Meiktila, central Myanmar on March 22, 2013. Charred bodies lay unclaimed on the streets ofariot-hit town in central Myanmar, witnesses said, as global pressure mounted for an end to the Buddhist-Muslim unrest. Parts of Meiktila have been reduced to ashes in the most serious communal violence to hit the former junta-ruled nation since last year, leaving the authorities struggling to bring the situation under control. AFP PHOTO/Soe Than WIN (Photo credit should read Soe Than WIN/AFP/Getty Images) 2013 AFP
ကဲ အမျိုး၊ဘာသာ၊ သာသနာ ကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်လိုသူများခင်မျာ။
ပုံထဲမှာ မြင်နေရတာကတော့ ခင်များတို့ လိုချင်တဲ့ ရလဒ်ပါပဲ။
ဒီလောက် ဆိုရင်တော့ ကျေနပ်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်တန့်သွားဖို့ တောင်းပန်ပါရစေ။ ရာကျော် ပြီး ပြာပုံအတိဖြစ်နေတဲ့ အိမ်ခြေတွေဟာ မွတ်စလင်တွေ အိမ်တွေကြီးပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အိမ်တအိမ်မှ မပါဘူး လို့ ခင်များတို့ ပြော နိုင်ကြပါသလားခင်မျာ?
ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်မီးပြန်ရှို့တယ်လို့တော့ ထပ်မပြောနဲ့တော့နော်၊ ဒါဟာ နယ်စွန်က ရခိုင် ဒေသ မဟုတ်ဘူး၊ မိတ္ထီလာ ဆိုတာ စစ်တပ်တွေ ဝိုင်းရံထားတဲ့ မြို့၊ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေကြီးရှိတဲ့ မြို့။ မီးဆိုတာ မျိုးက ဘက်မလိုက်တတ်ဘူး၊ အမျိုးဘာသာ သာသနာ မခွဲခြားတတ်ဘူး၊လောင်ပြီဟေ့ဆိုရင်တော့ အကုန်ပြောင်မှာပဲ၊ မွတ်စလင်အိမ်တွေကြီးပဲ ပတ်လောင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ အိမ်တွေကျ ကွေ့ရှောင်သွားတတ် မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကဲ…ဒီလိုလုပ်လို့ ပြန်ရတာနဲ့ကော တန်မယ်လို့ ထင်ပါသလားခင်မျာ? ပြန်ရနိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရလဒ်ကတော့ ဆင်းရဲမွဲတေမှူနဲ့ ရာဇဝတ်မှူထူပြော လာနိုင်မှူတို့ကတော့ အသေအချာပါပဲ။
ထပ်ပြီတောင်းပန်ပါရစေ၊ သတင်းအမှားတွေ ကို သိသိကြီးနဲ့ ဖြန့်နေကြတာကို ရပ်တန့်ပေးကြပါ။ နောက်ထပ်အခြားမြို့တွေကို မီးမကူးအောင် ကာကွယ်ပေးကြပါ။
ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့?? လက်မြောက်ပြီး တန်းစီထွက်လာကြတဲ့ ပုံလေး တပုံရဲ့ အကျိုးဆက်ဟာ နိုင်ငံတကာမှာ ဘယ်လောက်ထိ အကျိုးသက်ရောက်စေတယ်ဆိုတာခင်များတို့ မသိဘူး မဟုတ်လား? စိတ်မပူပါနဲ့၊ ခင်များတို့ ရက်ပိုင်းအတွင်း သိရမှာပါ။
အမှန်တရားနဲ့ အမှား နှစ်ခုကြားမှာ ကြားနေမှူဆိုတာ မရှိစကောင်းပါ၊ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ကို မကြိုက်ရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် က ရှုံ့ချပီး တတ်နိုင်သလောက် တားမြစ်ပေးကြပါ။ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလိုနေပြီး ကိုယ့်အိမ်ပါ မဆီမဆိုင် ရောပြီး ပြာပဲကျန်တော့တဲ့ အချိန်ဆိုရင်တော့ အရမ်းနောက်ကျသွားနိုင်ပါတယ်။
ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ အပြစ်မဲ့လူတွေနေရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ သွေးသား၊ ဆွေမျိုးသားချင်းဆိုရင် ဘယ်လိုခံစားရပါ့မလဲခင်မျာ??
ဖွကောင်းတိုင်း မဖွကြပါနဲ့တော့။ တတိုင်းပြည်လုံး ပြာပုံဖြစ်မှပဲ ဘာသာ၊သာသနာ တိုးတက်ထွန်းကား မဲ့ အဖြစ်မျိုးလဲ ဘယ်သူမှ လိုချင်ကြမဲ့ ပုံမပေါ်ပါဘူး။
ထပ်ခါ ထပ်ခါ တောင်းပန်ပါရစေ၊သင့်ရဲ့ ကလစ်တချက်ကြောင့် လူ့အသက်တွေ ဆက်ပြီး မဆုံးရှုံးပါစေနဲ့တော့။
ကျွန်တော့ တသက်မှာ ဒီစာကို လက် တုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့ ရေးလိုက်၊ပြန်ဖျက်လိုက်နဲ့ အချိန် အကြာဆုံး စံချိန်တင်ပါပဲ။
ဓာတ်ပုံကို ခွန်ဒီးယမ် ဖေ့ဘုတ်မှ ရရှိသည်။
← လက်ရှိမြန်မာတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို လေ့လာသုံး သပ်
ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ မိုင်းသောက်ကျေးရွာရှိ ဗလီအား မီးရှို့ရန် အကြမ်းဖက်လိုသူ လူတစ်စုမှကြိုးစား →